Orogenesis. Ihe ọ bụ, otu esi akpụ ya na ụdị | Netwọk Mgbasa Ozi
La orogenesis bụ nguzobe nke nnukwu ugwu na ugwu nke ala ahụ site na mmegharị ụfọdụ nke tectonic efere. Eziokwu ahụ bụ na ụwa na-agba gburugburu pụtara na ọ na-arụ ọrụ dị ka ụdị ihe dị ndụ nakwa na ọ na-agbanwe mgbanwe dị ka ihe dị ndụ. Itzọ o si egosipụta mgbanwe na mbara ala na ọdịdị lithosphere bụ site na ala ọma jijiji. Site na ngagharị nke mbadamba tectonic na ala ụwa, usoro a na-akpọ orogenesis guzobere ugwu ọhụrụ.
Chọrọ ịmatakwu banyere orogenesis na ụdị ya? Anyị na-agwa gị ihe niile.
1 Usoro nke orogenesis
2 Kedu ka esi esi emepụta ya?
3 Orodị nke orogenesis
4 Kedu ka orogeny si emetụta gburugburu ebe obibi
Usoro nke orogenesis
Ebe thewa enweghị a modus operandi Mee ngwangwa, ka anyi kwuo, anyi aghaghi iburu n’uche na oge o gha eme ihe n’onu mmadu. na-atụle geological oge anyị nwere ike ikwu na orogeny bụ usoro nwayọ nwayọ nwayọ nke na-eme na ntanetị. Ọ bụ ngagharị nke mpekere mpekere nke elu ụwa nke ala ahụ na-ebelata ma ọ bụ na-agbatị, dabere na ụdị ije.
N'ọnọdụ ụfọdụ, enweghị ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ, ọ bụ naanị nrụrụ. N'okwu ndị a, efere teknụzụ na-agagharị na ịkwa osisi ma ọ nweghị mgbanwe ọ bụla ma ọ bụ nke dịgasị iche. A na-ahụkwa usoro nke orogenesis dịka ụdị ngbanwe maka ugwu ugwu na ugwu ndị dị na kọntinent.
Dika anyi mara, ka otutu puku afo gafere, ugwu ndia na emebi ma ghara iduba onu ha site na mbuzo nke ikuku, mmiri ozuzo, snow, na udiri ihu igwe na ihe omumu banyere ala. Ya mere, Naanị otu ụzọ ụwa ga-esi mee ka elu ụwa ya dị ọhụrụ site na orogeny ma ọ bụ nhazi ugwu ọhụrụ ma ọ bụ ugwu ugwu.
Aha orogenesis sitere na setịpụrụ "ọlaedo" nke pụtara ugwu na "genesis" nke akọwapụtara dị ka mmalite ma ọ bụ okike.
Kedu ka esi esi emepụta ya?
Ebe ọ bụ na ọ bụ usoro nwayọ nwayọ na ọtụtụ puku afọ gafere, usoro dị iche iche na-eme site na nke orogenesis na-ewere ọnọdụ. Ka anyị hụ onye ọ bụla n'ime ha:
Kpakọba. E nwere ihe ndị dị nro dị n'elu ụwa nke nwere ike ịkpụzi na ịdaba ibe ha. N'oge a na-ahịgharị, ala ahụ na-amalite ịgbanwe. Enwere ike ịhụ ya na nhazi obere ugwu.
Ọdịda. Ka ngwakọta nke ngwongwo ndị dị nro na-adakọ, oge na-abịa mgbe ihe ndị siri ike na-agbakọta. Ọ bụ mgbe ahụ ka a na-agbaji ogige ndị kpụrụ.
Inye aka Nke a bụ nke ikpeazu nke eweghachitere ihe niile n'ọnọdụ ya.
N'oge mmalite nke orogeny, ugwu mgbawa na-apụta mgbe ụfọdụ. Ke uwụtn̄kpọ, se itịbede inọ Andes edi emi. Ọ bụrụ na orogen nke na-eme ihe mebere ma ọ bụ nkukota, o yikarịrị ka ugwu mgbawa ga-ebili. Agbanyeghị, ọ bụrụ na orogen ahụ dị ọkụ, ee. Na ndị nke nkukota, oghere na-guzobere jupụtara folds na ebe nke ndim. Nke a na - aputa n’ihi na otu igwe na - ejedebe n’elu ọzọ. Anyị nwere ike ịhụ ya nke ọma na Alps.
N'ihi usoro ndị a, etolite owuwu ndị nwere obere arc-dị ka bulges. Arta ndị a nwere aha eriri ororogen. Ha dị mfe ịchọpụta dịka ha dị ka mpekere agbatị ma yie na nkume. N'ime ogologo ogologo ya niile, eriri na-ejikọ eriri na oghere ebe efere tectonic na-achịkwa. Ọ bụ ebe a ka a na-emepụta ugwu mgbawa.
Orodị nke orogenesis
Orogenesis bụ usoro nwere ike ime n'ọtụtụ ụzọ:
Symmetric orogenesis: ọ na-adị mgbe efere kọntinent abụọ na-abanye n'ime ịda mbà n'obi na ala. A pụrụ ịhụ orogeny a na eziokwu na Pyrenees, Alps na Himalaya.
Asymmetric orogenesis: n'okwu a, ọ na - etolite n'ihi na efere kọntinent na - akụda ọzọ n'oké osimiri. Mgbe nke a mere, sedimenti ahụ na-agbakọ ma na-agbakọta na mpaghara subduction. Ya mere, efere okpuru mmiri oke osimiri na otu kọntinenti kachasị. Otu ihe atụ nke ụdị orogenesis bụ Ugwu Rocky na ndị Andes.
Orodị orogeny Alpine bụ akụkụ nke oge Tertiary. Na nhazi a, ugwu ugwu dịka Pyrenees, Ugwu Cantabrian na Alps ka emepụtara. Ọ bụrụ na anyị anọgide na-ejikọta ahịrị ndị kpatara ugwu ndị a, anyị nwere ike ịga n'ihu na East jikọọ Alps na Caucasus ma jikọta ya na Himalayas. Na-agabigaghị n'ihu, a na-enwe ugwu ugwu ndị Spain dị ka Betica na alpine orogenesis. Na Amerika anyi nwere Andes na Rocky Mountains.
Typedị ọzọ nke orogeny bụ Hercynian. A na-eme atụmatụ na ọ malitere ime na 300 nde afọ gara aga. N’akụkụ dị iche iche nke ụwa, ọ nwere mmetụta dị mkpa na mpịachi Caledonia, na-emetụta ọtụtụ Europe, Tasmania, North America na Ndị Appalachi.
N'ikpeazụ, Caledonia orogeny bụ nke na-ewere ọnọdụ na mwepụ nke efere tectonic ahụ mere afọ 400 gara aga. N'ime ogige a ka etolitere agbụ Caledonia ma nwee ike ịhụ ihe ngosi ya na Canada, North Asia, Australia na Scotland.
Kedu ka orogeny si emetụta gburugburu ebe obibi
Mepụta ugwu na ugwu na-emetụta mgbanwe nke gburugburu ebe obibi na mpaghara ala. Dịka enyemaka na-agbanwe, umu agha gha imeghari onodu ohuru ma gbanwee usoro ndu ha. Ihe a niile bụ usoro mgbanwe mmụta dị mgbagwoju anya ụmụ mmadụ ga-amụta, nyere na oge anyị n’elu ụwa dị mkpirikpi. Anyị na-ebi naanị ihe dịka afọ 100 na nkezi, yabụ na anyị enweghị ike ịhụ ihe ọ bụla, mana ọ nweghị ihe ọ bụla banyere mgbanwe ndị enwere. Naanị ihe anyị nwere ike ịchọpụta bụ ala ọma jijiji na-esite na mmegharị nke mbadamba ụwa a, mana anyị enweghị ike ịghọta nchupu nke efere ndị ahụ kwa afọ. Anyị maara na ha na-akpali centimita ole na ole kwa afọ, ihe na-enweghị isi maka ogo mmadụ.
Site na ozi a ị ga-enwe ike ịmatakwu banyere orogenesis.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Orogenesis
Perihelion na aphelion